XOG CULUS: Madaxweyne XASAN oo balan qaaday xilka Ra’iisul Wasaaraha, yaa loo wadaa? - iftineducation.com
XOG CULUS: Madaxweyne XASAN oo balan qaaday xilka Ra’iisul Wasaaraha, yaa loo wadaa?
aadan21 / December 6, 2016
iftineducation.com – waxaa maanta Magaalada Kismaayo ka dhacay kulamo kala duwan oo u dhaxeeyay Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Maamulka Jubland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Kulamada oo albaabada u xirnaa ayaa sida la tilmaamay waxaa ka soo baxay heshiisyo gaar ah oo ay wada gaareen labada Madaxweyne.
Madaxweyne Xasan ayaa taageero ku aadan ololihii musharaxnimo waxuu ka dalbaday Madaxweyne Axmed Madoobe.
Ilo ku sugan Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u balan qaaday Axmed Madoobe in xilka Ra’iisul Wasaaraha soo socoda uu siin doono Xubin ka tirsan Maamulka Jubaland.
Dhiniciisa, Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi, waxaana Mr. Axmed Madoobe ayuu sheegay in taageero xoogan ay la garab istaagi doonaan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Socdaalka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mid looga jawaabayay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, kaasi oo dhawaan gaaray Kismaayo, islamarkaana sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay isbadal dhanka hogaanka.
Ruushka iyo Shiinaha oo ka hor yimid hindise QM la soo hordhigay